बंगलादेशले रोक्न सक्ला भारतलाई ?
इंगल्याण्डमा चलिरहेको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको ४० औं खेलमा मंगलबार छिमेकी प्रतिद्धन्द्धीहरु भारत र बंगलादेश भिड्दै छन् । सामान्य तरिकाले बुझ्ने हो भने भारतले दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि बर्मिंघममा सुरु हुने खेल सजिलै जित्ने छ । इतिहास पल्टाउने हो भने भारतले फराकिलो अन्तरको जित निकाल्नेछ । भारत १२ वर्षदेखि बंगलादेशसंग विश्वकपमा हारेको छैन । सन् २००७ मा बंगलादेशले पोर्ट अफ स्पेनमा भएको खेलमा ५ विकेटको जित निकाल्न सफल भएको थियो । … पुरा पढौ
महानगरको योजना–‘मेयर कप’
पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि ल्याएको बजेटमा खेलकुदको पुर्वाधार तर्फ बजेट छुट्टाउँदा खेलकुद गतिविधिको लागि पनि सामान्य बजेट भने विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाले अल्टिच्युड खेल मैदान निर्माण गर्न, गोस्ते खेल मैदान लामाचौर, भण्डारढीक खेल मैदान, विजयपुर र आर्वामा खेल ग्राम निर्माणको पुर्वाधारको लागि बजेट छुट्टाईएको छ । त्यस बाहेक महानगरपालिकाले यसै वर्षदेखि मेयर कप खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने योजना बुन्दै त्यसको लागि छुट्टै बजेट राखेको छ । विभिन्न… पुरा पढौ
चुक्यो वेस्टइन्डिज, पुरनको शतकले दिलाएन जित
एकदिवसीय विश्वकप अन्तर्गत ३९ औं खेलमा श्रीलंकाले वेस्टइन्डिजलाई २३ रनले पराजित गर्दै तेश्रो जित दर्ता गरेको छ। वेस्टइन्डिजले भने छैठौं खेलमा हार बेहोर्यो। श्रीलंका र वेस्टइन्डिज विश्वकप सेमीफाइनल दौडबाट बाहिरीसकेको छ र यो खेलले नतिजाले अन्य टिमको सेमीफाइनल यात्रामा पनि कुनै असर गर्नेछैन। जितपछि श्रीलंका १ खेल खेल्न बाँकी रहदा बंगलादेशलाई उछिन्दै अंकतालिकाको छैठौं स्थानमा उक्लेको छ। श्रीलंकाले दिएको ३३९ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा वेस्टइन्डिजले पुरै ५० ओभर ब्याटिंग गरे… पुरा पढौ
पारसको कप्तानीमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा, अरु को को छन् टिममा ?
सिंगापुरमा आयोजना हुने आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप एसिया फाइनलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । नेपालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कप्तान पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो । नेपालले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर टिम घोषणा गरेको हो । नेपालले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका २५ खेलाडीबाट १४ सदसीय टिमको घोषणा गरेको हो । आईसीसीका प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, प्रशिक्षक उमेश पटवाल र कप्तान पारस खड्काले नेपाली टोली छनोट गरेका हुन् । नेपाली टोलीमा शरद… पुरा पढौ
दौड प्रतियोगिताको महिला र पुरुष दुवै उपाधी शसस्त्र प्रहरीलाई
राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित दौड प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फकै शसस्त्र प्रहरी वलले प्रथम स्थान हुन सफल भएको छ । ७ किलोमिटर फन दौडमा पुरुष तर्फ शसस्त्र प्रहरी बलका विष्णुबहादुर बुढा प्रथम भएका छन् । फेवातालको किनार खहरेबाट शुरु भएको दौड पामेको रोपाई महोत्सवस्थलमा पुगेर टुंगिएको थियो । ७ किलोमिटरको दुरीलाई बुढाले २७ मिनेटमा पुरा गर्दै प्रथम भएका हुन् । दौडमा शसस्त्र बलकै सोमेश हमाल भने २७ मिनेट १०… पुरा पढौ
टेनिस प्रतियोगितामा भाग लिन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा भुटानतर्फ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापा टेनिस प्रतियोगितामा भाग लिनका लागी भुटान गएका छन्। राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष थापा सोमबार बिहान भुटानको थिम्पुतर्फ उडेका हुन्। खेलाडीसमेत रहेका उनी एक साता भुटान बस्नेछन्। भुटान टेनिस फेडेरेशनले आयोजन गरेको पाँचौं भारत/भुटानमैत्री टेनिस प्रतियोगितामा थापा सहभागी हुने श्रेष्ठले बताए। पुरा पढौ
टी/२० विश्वकप छनोटका लागि नेपाली टिममा को को परे ?
आगामी साउन ६ देखि १२ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने आइसिसी टी(२० विश्वकप छनोट प्रतियोगिताका लागि नेपालले राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको छ। प्रशिक्षक उमेश पटवालसहितको छनोट समितिले पारस खड्काको कप्तानीमा १४ सदस्यीय नेपाली टिम घोषणा गरेको हो। नेपाल टिममा पारस खड्का (कप्तान), अभिनास बोहरा, बसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी,ललितनारायण राजवंशी, पवन सर्राफ, प्रदीप ऐरी, रोहितकुमार पौडेल, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी रहेका छन्। टिममा मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान… पुरा पढौ
कोपा अमेरिका: सेमिफाइनल समीकरण पूरा
पेनाल्टी सुटआउटमा उरुग्वेलाई हराउँदै पेरु कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बार्सिलोनाका स्टार फरवार्ड लुइस स्वारेजको पेनाल्टी पेरुका गोलरक्षकले रोकेपछि ५–४ को जित निकाल्दै पेरु सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। निर्धारित ९० मिनेटसम्म गोल हुन नसेकपछि खेलको छिनोफानो पेनाल्टीबाट भएको थियो। उरुग्वेको लागि पहिलो पेनाल्टी प्रहार गरेका स्वारेजको बल पेरुका गोलरक्षकले रोकेका थिए। उरुग्वेका बाँकी चार जना खोलाडी इडिसन काभानी, क्रिस्टियन स्टुआनी, रोड्रिगो बेन्टानकुर र लुकास टोरेरिया डि पासुकाले भने गोल… पुरा पढौ
गुल्टिए जर्मनी र इटाली, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड सेमिफाइनलमा
महिला विश्वकप फुटबलमा पुरुष फुटबलका महारथी राष्ट्रहरु जर्मनी र इटाली क्वार्टरफाइनलबाटै गुल्टिएका छन् । जर्मनीलाई स्वीडेनले र इटालीलाई नेदरल्याण्डले गुल्टाएको हो । फ्रान्समा जारी प्रतियोगितामा शनिबार राति भएको क्वार्टरफाइनलमा जर्मनीलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्वीडेन सेमिफाइनलमा पुगेको हो । स्वीडेनलाई जिताउन सोफिया जाकोबसन र स्टिना ब्लाकस्टेनिउसले एक एक गोल गरिन् । जर्मनीकी लिना मगुलले सुरुआती अग्रता दिलाए पनि टिमले त्यो लयलाई कायम राख्न सकेन । अहिलेसम्म विश्वकप जित्न नसक्ेको… पुरा पढौ
पाकिस्तान शीर्ष चारमा पुग्यो
इंगल्याण्डमा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले अफगानिस्तानमाथि महत्वपूर्ण जित हासिल गरेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा पाकिस्तानले विश्वकपको कान्छो सदस्य अफगानिस्तानलाई ३ विकेटले पराजित गरेको हो । जितसंगै पाकिस्तानले शीर्ष चारमा रहँदै सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । पाकिस्तानले ८ खेलबाट ९ अंक जोडेको छ । अफगानिस्तानले अंक बटुल्न सकेको छैन । यस्तो छ खेलको अवस्था लिड्समा भएको खेलमा अफगानिस्तानले दिएको २२८ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले ४९.४ ओभरमा… पुरा पढौ
Page 87 of 142« First«...102030...8586878889...100110120...»Last »